IIMO badan oo kasoo if baxay internet-ka shalay go’ay (Arag dhibka shacabka haysta) | Hadalsame Media
Home Maqaallada IIMO badan oo kasoo if baxay internet-ka shalay go’ay (Arag dhibka shacabka...
IIMO badan oo kasoo if baxay internet-ka shalay go’ay (Arag dhibka shacabka haysta)
(Muqdisho) 27 Luulyo 2020 – Shacabku dhinac walba waa ka dulman yihiin. Sharikadda (Hormuud) ma ahan sharikad isgaarsiineed oo kaliya balse waa bangi ay maalinle, saacadle, iyo daqiiqadle u adeegsadaan guud ahaan shacabka bartamaha iyo koofurta Soomaaliya. Haddii khadka internet-ku istaago ma jiro qof kaniini gadan kara, qof biyo cad gadan karo, iyo hooyo cunuggeeda caano u iibin kartaa.
Sidoo kale dhammaan ganacsiyada mid yar iyo mid wayn irdaha ayaa la isugu dhufanayaa haddii khadka internet-ku istaago waayo wax ma iibin karaan waxna laga ma iibsan karo.
In dadweynuhu lacagohooda dhan sharikad gaar loo leeyahay (private) ku aamminaan waxaa sabab u ah shilin soomaaligii oo meesha ka baxay, nidaamka bangiyada ee dalka oo aad u liiya iyo hawl-fududaysi.
Sharikaddii malaayiintaas qof mas’uuliyaddooda dhabarka u ridatay 12 saac kaddib oo internet la’aan ah iyo cunaqabayn ah ayaa waxay soo qortay warqad AF SHISHEEYE ku qoran oo aan la aqoon macaamiisha ay kula hadlayso (malaha qurbajoogta hoteellada jiifa ayay la hadlasay).
Maxaa sababay in 12 ay sharikaddu aamusnaato?
Maxaa sababay in sharikaddu aysan 12 saac kaddib wali dirin farsamo yaqaanno hagaajiya kaybalka cilladoobay? (Waaba hadday run tahay’e).
Haddii Hormuud ku oolli lahayd dalka aan joogo (Australia) ama dal kale boqollaal milyan oo doollar oo magdhow ah ayaa laga qaadi ahaa ganaax culusna dhabarkaa loo saari ahaa.
Waxa maanta dalka dhacay waxa ay digniin u yihiin qof walba dalka jooga oo hantidiidi sharikad (private) u dhiibay. Ka warrama haddaan dib dambe loo furin khadka ama sharikadda iyo adeeggeeda EVC PLUS? Halkee hantidiinnii u doonaynaysaan?
Adeegga lagacaha moobeellada la isugu diro inkasta oo uu faa’ido leeyahay haddana ma ahan mid lagu kalsoonaan karo ama dammaanad qaad leh waana halis dhaqaale iyo mid amni.
Previous articleMaxaa ka jira in internet-ka loo jaray hab-dhaqaaqyo siyaasadeed?
Next articleMasar oo sheegtay inay Faransiiska la samaysay dhoollatus badeed (Sawir been abuur ah oo ay isticmaashay!)